Kuzvikudza Kwekambani | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 8, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zviri nyore sepitsa asi havangoiwana.
Iko kushomeka kwekushamwaridzana kwemakambani. Unogona kuona zviratidzo zvacho kwese kwese uye zvinokwira kupinda mumasangano ese. Panongotanga sangano kufunga kuti iro rinoziva zvirinani kupfuura vatengi varo, ivo vanotanga kurasikirwa ne traction yavo. Zvinonakidza kwandiri kuti makambani mazhinji anongofunga kuti iri idambudziko zvechokwadi kana makwikwi ari nani achiuya. Panguva iyoyo, ivo vanopomera kubuda kwevanhu vazhinji pamakwikwi, kwete nekusagona kwavo kuita.
Zvinoita sekunge makambani anotenda kuti hapana ROS, kana Dzoka paSevhisi. Mamwe makambani ane hombe mutengi churn… uye pane kuyedza kugadzirisa nyaya uye kuratidza kuonga kumutengi, ivo vanongopomba mamwe madhora mukuwana vatengi kutsiva avo vasiya. Ivo vanoramba vachiedza kuzadza iro rinodonha bhaketi kusvikira pasina chinoshanda - uye vanofa. Mazhinji emakambani aya ane homwe dzakadzika kwazvo, zvakadaro, uye achiramba achishatisa mukana wakanaka kwazvo wavanogona kunge vakave nawo mukutibata zvakanaka, kururamisira uye nekuvimbika.
kuzvitutumadza, kuzvitutumadza, kunyunyuta, kuzvidza, kuzvikudza, kuzvikudza, ishe, kuchengetedza, dhongi rakangwara, snobbish, snooty, supercilious, yepamusoro, uppish, uppity - Thesaurus.com - Kuzvikudza
Heano mimwe mienzaniso yakanakisa yekuzvikudza vhiki rino:
Samsung - apo mutengi akafotora kuti zvaive nyore sei kutyora foni, Samsung yakafunga kutora matanho epamutemo kurwisa mutengi pane kugadzirisa foni.
Katherine Harris - paakatumira bhurogu yake munjodzi yake nyowani yemushandirapamwe, zvinoita sekunge vashanyi vake vaive vamwe kunze kwekutumira maemail kubva kukambani yakavaka saiti iyi.
HP - pane kushandira kuvaka zvirinani Hardware (isu tine HP nyowani nyowani pabasa yatsiviwa nhasi… ndinofunga tinogona kuburitsa peji 1 pakati pega gadziriso), HP yakafunga neimwe nzira kuti kusora vashandi vavo vekambani neimwe nzira kunopa mhinduro … Mumwe munhu anoda kunditsanangurira izvi. Kambani isingaremekedze vashandi vayo haisi iyo yandinoshuvira kuve yakabatana nayo.
Ask.com - Kuedza kusimudzira mashandisiro einjini yekutsvaga, Ask.com iri kuvhura midhiya blitz kuyedza uye kukwezva vashandisi. Nei usingatore mari iyoyo woita chigadzirwa chakakodzera kushandisa? Ini ndinofungidzira sezvo vachifunga kuti vane inotonhorera peji remba izvozvi, vanhu vanozovashandisa zvimwe.
apuro - inobvuma kuti pane dambudziko 'diki' nemaMacBooks ayo anozovhara. Tsanangudzo ye 'zvishoma'? Yakanyanya kudhura kuyeuka.
Microsoft - Usavake chigadzirwa chakakura, ingoita kuti munhu wese aite kurodhaunira usingavabvunze nekuchinyorera se 'chakanyanya kugadzirisa'. Ini akanyora nezve izvi. Zvinoita sekunge chinangwa chavo chakanyengera kupfuura zvandaifungidzira, nekuchinja yako yekutsvaga injini kuMSN pakuiswa kweIE7.
Ticketmaster - VAGADZIRI vese vanofanirwa kucherechedza izvi… muCanada, Tiketimaster ari kumhan'arirwa nekuti webhusaiti yavo haigoneke nevanhu vane hurema. Saiti yangu haigoneke zvizere chero asi nyaya iyi mureza mutsvuku. Isu tese tinofanirwa kunge tichivavarira kupa masevhisi kune vese vatengi! Icho chokwadi ndechekuti, ingori nyaya yesource .. hapana chimwe chinhu. Zvakare, iri nzira chaiyo yekupa vatengi vako kana tarisiro nepfungwa yekuti une hanya.
Dzimwe nyaya dzine magumo anofadza, hazvo:
Facebook - nechavo chinyowani chinoburitswa chinoshanda, Facebook nekusaziva yakakanganisa kuchengetedza kwevatengi kwavo. Ndine chivimbo chekuti vachapora zvizere nekuda kwehutungamiriri hwekambani.
Digg - mukuyedza kupa zvirinani kurema kwenyaya mune yavo ine simba hutachiona kuisa injini, Digg yakanamatira kune avo vashandisi vemasimba, vangangodaro vanga vachishandisa iyo sisitimu yavo pachavo. Digg yakaita sarudzo chaiyo nekuvandudza iri sevhisi kune VATengi vatengi kwete maDigger mashoma avo vaiwana ichiwedzera simba.
GetHuman uye Bringo / NoPhoneTrees.com vari kuunganidza masimba ekupa ruzivo rwekuti ungabvuta sei nharembozha masisitimu kuti uwane izwi chairo kune rimwe divi rerunhare.
ZipRealty - saiti inobvumidza vanhu kutumira zvavanotaura online pamusoro pedzimba dzavakashanyira dziri kutengeswa.
Ford - apo kambani isiri kuita zvakanaka, Ford iri kushinga. Kunyangwe kushinga sekuchinja mamwe madhora ekushambadza kune akakurumbira mablog.
Ndinovimba iwe unoona hukama pano… mabhizimusi akabudirira achienda kunatsiridza hukama, zvigadzirwa, uye masevhisi nemakasitoma avo nepo makambani asina hurombo achiregeredza, kupokana, kudheerera nekufungidzira nevatengi vavo. Dai isu chete taigona kurangarira izvo:
Iwe haugone kunzwisisa kukosha kwechigadzirwa chako kumutengi wako.
Iwe haugone kufungidzira kuti kuchinja chigadzirwa chako kuchabata sei vatengi vako kusvikira iwe uchidaro.
Iwe haunzwisise zvizere mashandisiro anoita vatengi vako chigadzirwa.
Kana iwe usingataure / teerera / kuremekedza / kutenda / kunzwira tsitsi ne / kukumbira ruregerero kune / vako vatengi, mumwe munhu anozo.
Mutengi wako anobhadhara muhoro wako.
Wakandiudza zvawaizonditengesera. Ndakakuudza kuti ndaizvida sei. Makandiudza kuti ndaizoiwana rinhi. Iwe wakandiendesa kwandiri pawakati iwe uchadaro. Wakaendesa zvaunoti uchaita. Waendesa zvandikukumbira. Ndakubhadhara. Makanditenda. Ndakutenda. Ini ndichahodha zvakare munguva pfupi.
Zviri nyore sepitsa.
Iwe Unofarira Unoverenga Technorati?
Sep 8, 2006 na7: 46 PM
Zvinoshamisa kuti vashoma sei vanowana iyo yekutanga pfungwa. Earl Nightingale akaiisa kare kare. Iwe unobhadharwa mubhizinesi nebasa chairo raunopa.
Sep 9, 2006 pa 5: 44 AM
Yakanyatsonyorwa yakanyorwa Doug, haina kumbonzwa nezvezvimwe zvezvinhu izvozvo kare.
Sep 16, 2006 pa 2: 28 AM
Uyu mutsara unonyatsopfupisa yakawanda yezvakaitika panguva ye dot com boom uye bust.
"Mamwe makambani ane hombe mutengi churnâ? ¦ uye pane kuyedza kugadzirisa nyaya uye kuratidza kuonga mutengi, ivo vanongopomba mamwe madhora mukuwana vatengi kutsiva avo vasiya."